Meghan Markle နှင့် Elizabeth II ကို: လေးစားမှုကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဗတ္တိဇံ
မင်းသားဟယ်ရီ၏သတို့သမီး, ဆဲအချို့ဝေဖန်ထားခြင်း၏အနာဂတ်မင်္ဂလာဆောင်သံသယရှိနေသော်လည်းအဓိကဘုရားကျောင်းစက္ကမင်မင်္ဂတဦးကိုခံယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် - ဗတ္တိဇံ, အခမ်းအနားဒီနှစ်မတ်လထဲမှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ Meghan Markle သူ့ဇနီးယုဒလူသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သူပရိုတက်စတအစဉ်အလာအတွက်ဆောင်ခဲ့အင်္ဂလီကန်, accept, ငါသည်သူမရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဘုရင်မကြီးတစ်အခွန်ဆက်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကိုပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း, ဒါပေမယ့်လည်းအင်္ဂလန်၏ဘုရားကျောင်းမသာကြောင်းကိုသတိရပါ။ ထို့အပြင်ဦးဆောင်ဗြိတိန်ထုတ်ဝေအတိုငျး, အနာဂတ် Duchess လက်မထပ်မီတစ်ဦးရဲ့ဘာသာတရားပြောင်းလဲပစ်ရန်မရှိပါ။
Kensington နန်းတော်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို, Canterbury ၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးလုပ်ဆောင်သွားရန်ပါလိမ့်မယ်။ Megan ရဲ့မိဘများလန်ဒန်မြို့တွင်ရောက်ရှိမည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျပြီးသားအနာဂတ်မှာသား-In-ပျံသန်း Los Angeles မြို့ထဲကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သောသောမတ်စ်ရဲ့အဖေအဘို့, ဟယ်ရီနှင့်တစ်ခုလုံးကိုတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူစည်းဝေးပထမဦးဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့် Markle ၏, အမိကိုသိသည်။
ယခုပင်လျှင်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌, Megan တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်သူမ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဘို့အထွက်သွားလိမ့်မည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ဟယ်ရီဟာဧကရာဇ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ access များအတွက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည်သတို့သမီး, ဓနသဟာယနေ့ကဒီများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်။ UK ရှိဓနသဟာယအစဉ်အလာ၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားများသောအားဖြင့်မတ်လ၏ဒုတိယတနင်္လာနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။
ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူပထမဆုံးတရားဝင်ဖြန့်ချိ Meghan Markle တော်ဝင်မိသားစုအပေါငျးတို့သအဖွဲ့ဝင်များကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလက်ဆောင်များမှာဘယ်မှာ Westminster Abbey မှာဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပါလိမ့်မည်။ လူအားလုံးတို့သည်စာနယ်ဇင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အများပြည်သူ, အဓိကအားဖြင့်သင်တန်း၏, ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်, Megan, ဒါပေမယ့်ပရိတ်သတ်တွေလည်းမင်းသားဝီလျံနှင့်သူ၏ဇနီးကိတ် Middleton, ကိန်းဘရစ်၏ Duchess ၏အသွင်အပြင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ၏မင်္ဂလာဆောင်မှသည်အများဆုံးရယ်စရာနှင့်ရယ်စရာအချိန်လေးနှင့်အင်တာနက် meme!
မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအသေးစိတ်ကိုနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံ!
ကျနော်တို့ပြီးသားပွဲတော်ဗြိတိသျှဂီတပညာရှင်အဆိုတော်, နာမည်ကျော်တီးဝိုင်း One Direction အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်း၏အမိန့်ခွန်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။
ကိတ် Hudson ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရမ်းမြင့်မားတဲ့တစ်ဖြတ်၏အလွန်အကျွံပြသ
အာဒံကို Levine နှင့် Behati Prinsloo ဒုတိယအကြိမ်မိဘများဖြစ်လာ
Scarlett Johansson, ထိုအရှုပ်အသနားခံစာသော်လည်း "ဟုအဆိုပါရှဲလ်အတွက်ဝိညာဉ်တော်" များတွင်ကစားပါလိမ့်မယ်
ပယင်း Heard ဂျော်နီ Depp အမည်းဖေါ်ပြခြင်း, သူမ၏ရိုက်နှက်သူကပြောပါတယ်
Lindsay Lohan နှင့်သူမ၏အမွှာအစ်မ
မိန်းကလေးများနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင် Selena Gomez လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်
Chloe Kardashian ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးမွေးကင်းစသမီး၏မျက်နှာကိုပြသ
ရုရှားမင်းသမီးမာရီယာ Poroshina မကြာမီစတုတ္ထအကြိမ်မိခင်တစ်ဦး ... ဖြစ်လာလိမ့်မည်!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကဗြိတိသျှကြယ် Tilda Swinton
Janet Jackson ကစင်မြင့်မှကွာရှင်းနှင့်ပြန်လာအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်
ရာခေလသည် McAdams ပထမဦးဆုံးအကြိမ် mom, ဖွစျလိမျ့မညျ
သူ့လူငယ်အတွက် Pamela Anderson က
Sequins နှင့်အတူလက်သည်းဒီဇိုင်း - sparkle တွေနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လက်သည်းခေတ်ရေစီးကြောင်း
ကြော် chanterelles နဲ့အာလူး
တောက်ပြောင်မရှိမဖြစ် Homme ၏နိုဝင်ဘာလကိစ္စများအတွက်အသစ်များကို photoset အတွက်လုအီဗန်
Provence ရဲ့ style အတွက်မီးဖိုချောင်
ဖြစ်တည်မှုအကျပ်အတည်း - အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ
Ariana Grande ထိခိုက်သူအပေါငျးတို့အားမိမိဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်သူမ၏ဖျော်ဖြေပွဲစဉ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်
မျက်ခုံး 2016 ပုံဖော်
အဆိုပါထွက်ပေါက် 2016 ရက်တွင်လက်သည်း
Ravioli များအတွက် Stuffing
စတိုင် switch ကို
ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းဂုဏ်အသရေ-အမေရိကန် Vogue များအတွက်ဗီဒီယိုထဲမှာကြယ်ပွင့်
Janet Jackson ကနှင့် Wissam al-Mana တစ်ရှုပ်ထွေးကွာရှင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမရှိဘဲကုသမှု intervertebral အူကျ
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသံသရာ - မျိုးပွား function ကို၏ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်အားလုံး